နေချင့်စဖွယ်ကျွန်တော့်အိမ်ငယ် – သီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်း (တအောင်းလူမျိုးများနေထိုင်သည့် ကျောက်ဖရုံသီးရွာ (ဝါ) ချူတုံးကွာရွာ) – 缅甸吉祥网
နေချင့်စဖွယ်ကျွန်တော့်အိမ်ငယ် – သီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်း (တအောင်းလူမျိုးများနေထိုင်သည့် ကျောက်ဖရုံသီးရွာ (ဝါ) ချူတုံးကွာရွာ)
2019-02-20 2019-02-20 Rui
မှတ်ချက်။ ။ အမည်းရောင်သည် နောက်ခံအသံတွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
အနီရောင်သည် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအသံသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဆောင်းဦးရာသီအလယ် (autumn equinox) မတိုင်မီ ချူတုံးကွာရွာတွင် နေထိုင်ကြသော တအောင်းလူမျိုးများသည် အရေးပါသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည့် “ကျင့်ဝါး” (၀ါ) တံခါးပိတ်ပွဲတော်အား ကြိုဆိုကျင်းပကြသည်။ အဆိုပါပွဲတော်သည် တိုင်လူမျိုး၊ တအောင်းလူမျိုးများ သက်ဝင်ယုံကြည်သော ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တံခါးပိတ်ပွဲတော် စတင်ကျင်းပသည့်နေ့တွင် ကျေးရွာအတွင်းသို့ ဘုရားပင့်ဆောင်ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ကျေးရွာအတွင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း၊ ချစ်ရေးဆိုခြင်းအားတားမြစ်ပြီး ရွာသူရွာသားများသည် လယ်ယာကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းကိုသာ အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
မနက်အာရုံလင်းအချိန်တွင် ချူတုံးကွာရွာမှ ကျောက်ယွိယွဲ့သည် တံခါးပိတ်ပွဲတော်တွင် ဘုရားအမှု ဆောင်ရွက်ရန် အသုံးအဆောင်များအားပြင်ဆင်ပြီး အိမ်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှ သက်ကြီးဝါရင့် ပုဂ္ဂိုလ်များအားဖိတ်ကြားကာ ဘုရားခန်းသို့လာရောက်ပြီး ရာသီဥတု၊ မိုးလေဝသကောင်းမွန်ပြီး သီးနှံ အထွက်တိုးစေရန် ဆုတောင်းကြသည်။ ယခုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ တံခါးပိတ်ပွဲတော်ကာလအတွင်း ခုနှစ်ရက်တစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ရသည့်အမှုကိစ္စဖြစ်သည်။
ကျောက်ယွိယွဲ့သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏တစ်ခုတည်းသော တအောင်းလူမျိုးများနေထိုင်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်သည့် စန်းထိုင်စန်းကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ချူတုံးကွာရွာတွင် မွေးဖွားနေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ တအောင်း လူမျိုးအား ရှေးကျသည့်လက်ဖက်တောင်သူများအဖြစ် လူသိများကြသည်။ လက်ဖက်သည် အဆိုပါဒေသ၏ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံဖြစ်သည်။ တအောင်းလူမျိုးများသည် ရှေးကျသည့် မြေတွင်းအချဉ်ဖောက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြင့် လက်ဖက်ချဉ်ပြုလုပ်ကြသည်။ သီးနှံရိတ်သိမ်းရာသီဖြစ်သည့် တံခါးပိတ်ပွဲတော်တွင် အမကြီးကျောက်ယွိယွဲ့သည် သူမ၏တစ်နေ့တာအချိန်အများစုအား သူမ၏ ခင်ပွန်းသည်နှင့်အတူ လက်ဖက်ချဉ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကုန်ဆုံး လေ့ရှိသည်။
ကျောက်လှလျှို (ယောက်ျား အသက်၅၀လောက်) – ဒီတစ်ခုအချဉ်ဖောက်တာကောင်းတယ်၊ အနံ့မွေးနေတာပဲ။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က အမကြီးကျောက်သည် သူမပေါင်းခံထားသည့်လက်ဖက်အား ဝါးလုံးခေါင်း အတွင်းထည့်ကာ သဘာဝနည်းဖြင့်အချဉ်ဖောက်ရန် မြေကြီးတွင်မြှပ်နှံထားခဲ့သည်။ ဝါးလုံးခေါင်းအား မြေကြီးမှပြန်လည်ဖော်ထုတ်သောနေ့တွင် အချဉ်ဖောက်ထားသောလက်ဖက်အား ကျော်ကြိတ်ဆုံ အတွင်းထည့်ကာ ကြေမွအောင်ထောင်းသည်။ ထို့နောက် အလုံးငယ်များလုံးပြီး လက်ဖက်ကိတ် ဖြစ်စေရန် ပြားအောင်ဖိလေသည် နှစ်ရက်အခြောက်ခံသည်။ အခြောက်ခံပြီးပါက အတုံးငယ်လေးများ အဖြစ်ညှပ်သည်။ ထို့နောက် ရက်အနည်းငယ် နေပူခံပြီးပါက ကုန်ချောအဖြစ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ကျောက်လှလျှို (ယောက်ျား အသက်၅၀လောက်)- ခပ်သွက်သွက်လုပ်မှရမယ်။ ဝယ်မဲ့သူတွေရောက် လာတော့မယ်။
ကျောက်ယွိယွဲ့ (မိန်းမ အသက်၅၀လောက်)- အခုလိုလာဝယ်တာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ သားတွေ၊ သမီးတွေက အိမ်ထောင်မကျ သေးဘူး။ ချွေးမတောင်းတဲ့နေ့မှ ပိုက်ဆံမရှိရင် ချွေးမကအိမ်မလာတော့ ဘူးလေ။
ရှေးကျသည့် လက်ဖက်အချဉ်ဖောက်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် လက်ဖက်ရွက်ကြီးမျိုးဖြစ်သည့် ဖူအယ် လက်ဖက်၏ ထူးကဲကောင်းမွန်သည့် အနံ့၊ အရသာအား ကျန်ရစ်စေသည့်အပြင် အချဉ်ဖောက်ပြီးပါက အနည်းငယ်ချဉ်သည့် အရသာတိုးလာစေပြီး ဖန်ခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိပဲ ခံတွင်းထဲတွင် ဆိမ့်သက်သည့် အရသာ ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်များအတွင်း တအောင်းလက်ဖက်ချဉ်သည် ပိုမိုလူသိများ လာလျက်ရှိပြီး တအောင်းလက်ဖက်ချဉ် ရောင်းချခြင်းသည် အမကြီးကျောက်၏ အဓိကဝင်ငွေဖြစ်သည်။
ကျော်ယွိယွဲ့ (မိန်းမ အသက်၅၀လောက်)-
ကျွန်မတို့ရဲ့လက်ဖက်ကို ပိုမိုများပြားတဲ့လူတွေကြိုက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ လူကြိုက် များလေ ကျွန်မတို့ပိုပြီးရောင်းရလေ ဝင်ငွေလည်းပိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမကြီးကျောက်၏အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်သည့် လီအဲ့ကျင်းသည် ကျေးရွာအတွင်း လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုအား လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းမှာ Macadamia အခွံမာသီးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။
လီအဲ့ကျင်း (ယောက်ျား အသက်၃၅လောက်)-
အပင်မြင့်လေ အသီးပိုသီးလေပဲ။ လှေကားမသုံးလို့မရတော့ဘူး။ အသီးတွေက အခိုင်လိုက် သီးတာ။ ဒီတစ်ခိုင်ဆို နှစ်ကီလိုလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။
ကျေးရွာအခြေစိုက်ဝန်ထမ်း (ယောက်ျား အသက်၃၅လောက်) – ခင်ဗျားတို့အိမ်ကအပင်ကမဆိုးဘူး၊ ထိန်းသိမ်းတာကောင်းတယ်။
ချူတုံးကွာရွာမှ ကျေးရွာအခြေစိုက်ဝန်ထမ်းသည် တံခါးပိတ်ပွဲတော်ကာလအတွင်း လူအဲ့ကျင်း၏စိုက်ခင်း မှ အခွံမာသီးအထွက်နှုန်းအခြေအနေအား အလွန်ဂရုစိုက်ကြသည်။
လီအဲ့ကျင်း (ယောက်ျား အသက်၃၅လောက်) – အခွံမာသီးတွေက ဆက်တိုက်ဈေးကောင်ရလာတယ်။ နောက်ပြီးထိန်းသိမ်းရတာလည်း လွယ်ကူတယ်။ ဒီအပင်တွေအသီးသီးတာ နှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်၊ ၅၀၀၊ ၆၀၀ ကီလိုဝန်းကျင်ရှိမယ် ထင်တယ်။
၂၀၀၆ ခုနစ်မှစတင်ပြီး ချူတုံးကွာကျေးရွာအတွင်းရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်းများတွင် Macadamia အခွံမာသီး စတင် စိုက်ပျိုးကြသည်။ လီအဲ့ကျင်းသည် ချူတုံးကွာကျေးရွာတွင် ၎င်းအခွံမာသီးအား အများဆုံး စိုက်ပျိုးသည့်တောင်သူဖြစ်ပြီး မူ ၃၀ ကျော် (၆ မူ = ၁ ဧက) စိုက်ပျိုးသည်။ တံခါးပိတ်ပွဲတော်ကာလ သည် လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့်ကာလဖြစ်ပြီး လီလဲ့ကျင်းအား အခွံမာသီးစိုက်ပျိုးခြံတွင် အမြဲတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ အသီးမသီးမီ ကနဦးနှစ်များအား ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးနောက် အခွံမာသီး၏ အထွက်နှုန်းသည် ဆက်တိုက်မြှင့်တက်လျက်ရှိသည်။ လီအဲ့ကျင်းသည် အခွံမာသီးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ၎င်း၏မျှော်လင့်ချက်အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရန်လည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဆွတ်ခူးရရှိသောအခွံမာသီးအား ကျေးရွာအတွင်းရှိ ပဏာမကုန်ချောစက်ရုံသို့ ပို့ဆောင်ကြသည်။ အဆိုပါနေရာတွင် အခွံမာသီးအား အခွံခွာခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်းများပြုလုပ်ပြီး အထက်ပိုင်း လုပ်ငန်းဆီသို့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ပို့ဆောင်သည်။ ပဏာမကုန်ချောစက်ရုံတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည့် အလုပ်သမားများသည် ကျေးရွာစုပေါင်းအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့ဝင်တောင်သူများဖြစ်ကြသည်။
အခွံမာသီးစက်ရုံပိုင်ရှင် (ယောက်ျား အသက်၃၀လောက်) – ယခုလက်ရှိမှာ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် စုပေါင်းအဖွဲ့အစည်း၊ တောင်သူနဲ့ ကုမ္ပဏီတို့ အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံနဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက ပညာရှင် စေလွှတ်ပြီး တောင်သူတွေကို နည်းပညာပိုင်းအကူအညီပေးပါတယ်။ တစ်ချို့ငွေအရမ်းလိုအပ်နေတဲ့ တောင်သူတွေအတွက် အခွံမာသီးရောင်းရငွေကို တစ်နှစ်စာ ကြိုတင်ပေးချေပြီး တောင်သူတွေကို ဦးစွာ စိုက်ပျိုးစေပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ တို့ချဲ့ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ နောက်ပြီး အရည်အသွေးပိုင်းကို မြှင့်တင်သွားမှာပါ။ ဘာကြောင်လဲ့ဆိုရင် အရည်အသွေးကောင်းရင် ရောင်းမထွက် မှာကို စိတ်မပူရပါဘူး။
လီအဲ့ကျင်း (ယောက်ျား အသက်၃၅လောက်) – အခွံမာသီးရောင်းရငွေကို ဇနီးနဲ့သားတွေအတွက် အဝတ်အစားအသစ်တွေ ဝယ်ပေးပါ တယ်။ အခွံမာသီးအပင်က ပိုကြီးပိုမြင့်လေ အသီးပိုသီးလေ။ အပင် ဒီလောက်ကြီးလာရင် တစ်ပင်ကို ကီလို ၁၀၀ ကျော် ခူးလို့ရမှာဖြစ်ပြီး သွားရောင်းရင် ယွမ် ၁၀၀၀ ကျော်ရမှာ။ တွက်ကြည့်လေ တစ်ပင်ကို တစ်ထောင်ကျော်ဆိုရင် ဆယ်ပင်ဆို တစ်သောင်းကျော်ရမှာ။
ကျော်လှလျှို (ယောက်ျား အသက်၅၀လောက်) – ဒီမှာလာကစားမယ်။
ကျေးရွာအခြေစိုက်ဝန်ထမ်း (ယောက်ျား အသက်၃၅လောက်)- ခုနက လီအဲ့ကျင်းရဲ့အိမ်သွားပြီး အခွံမာသီးခူးနေတာသွားကြည့် တာ။ ခင်ဗျားအိမ်က လက်ဖက်ချဉ်အခြေအနေကော ဘယ်လိုရှိလဲ?
ကျောက်ယွိယွဲ့ (မိန်းမ အသက်၅၀လောက်)- လာပါ ဆရာရွှီ၊ အခါးရည်လေးသောက်ပါအုံး။
ကျေးရွာအခြေစိုက်ဝန်ထမ်း (ယောက်ျား အသက်၃၅လောက်)- ဒီနေ့ ခင်ဗျားတို့အိမ်ကိုလာတာ လက်ဖက်ချဉ်အခြေအနေသိချင်လို့။ အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ?
ချူတုံးကွာကျေးရွာအခြေစိုက်ဝန်ထမ်းသည် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာတစ်ခုပြောပြရန်အတွက် ကျောက်ယွိယွဲ့နေအိမ်သို့ လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်သည် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တရုတ်ရိုးရာ ပြက္ခဒိန်၏ ဆောင်းဦးအဝင်နေ့အား “တရုတ်နိုင်ငံတောင်သူလယ်သမားများသီးနှံရိတ်သိမ်းပွဲတော်” အဖြစ်သတ်မှတ်သည့် ပထမဆုံးနှစ်ဖြစ်သည်။ ဆောင်းဦးရာသီအလယ်နေ့သည် တအောင်းလူမျိုးများ၏ ရိုးရာပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ တံခါးပိတ်ပွဲတော်ကာလနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေသည်။ ကျေးရွာမှဦးစီးပြီး အဆိုပါပွဲတော် နှစ်ခုအား စုပေါင်းပြီး ရိုးရှင်းကာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသည့် အခမ်းအနားပွဲတော်တစ်ခုအဖြစ် ကျင်းပရန် စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါနေ့တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်တိုင်းစေ့ ပါဝင်ဆင်နွှဲရန် ဖိတ်ကြား ထားသည်။
ဆောင်ဦးရာသီအလယ်နေ့ မနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ ယဉ်ကျေးမှုရင်ပြင်တွင် ရွာသူ၊ ရွာသားများဖြင့် ပြည့်နှက်နေပြီဖြစ်သည်။ အားကစားတွင်စိတ်ပါဝင်စားသော တအောင်းလူမျိုးများသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တံခါးပိတ်ပွဲတော်အတွင်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အားကစားပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်အား ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲ၊ မြားပစ်ပြိုင်ပွဲ၊ လွန်ဆွဲပြိုင်ပွဲများကျင်းပပြီး အနီးအနားကျေးရွာမှပါ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်လေ့ရှိသော ရိုးရားအားကစားပြိုင်ပွဲများ ဖြစ်ကြ သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် – ကျားယို့ (အားပေးသံ)
ဒုကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ယောက်ျား အသက်၄၀လောက်)- စန်းထိုင်စန်းကျေးရွာအုပ်စုဟာဆိုရင် တအောင်းလူမျိုးတွေ နေထိုင်ရာ အရပ်ဖြစ်တဲ့အပြင် အခွံမာသီး အဓိကစိုက်ပျိုးရာဒေသလည်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ် အခွံမာသီးအထွက်နှုန်း မှာ ကောင်းမွန်တဲ့အတွက် ယခုအားကစားအစီအစဉ်မှာ အခွံမာသီးလက်ဆင့်ကမ်းပြိုင်ပွဲကို ထည့်သွင်း ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ယခုနှစ်များအတွင်း အခွံမာသီးလုပ်ငန်းသည် အောင်မြင်မှုများရရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာအတွင်း ကျင်းပသော အားကစားအစီအစဉ်အသစ်ရရှိခဲ့သည်။
ကျေးရွာအတွင်း အခွံမာသီးအား အများဆုံးစိုက်ပျိုးသည့်တောင်သူဖြစ်သည့် လီအဲ့ကျင်းသည် ရွာသူရွာသားများအား တာဝန်ယူစုစည်းပြီး “အခွံမာသီး လက်ဆင့်ကမ်းပြိုင်ပွဲ” အား ကျင်းပခဲ့သည်။
ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများအတွက် “တအောင်းလူမျိုးဘိုးလင်းကစားခြင်း” အားကစားနည်း ထည့်သွင်းကျင်းပသည်။ “ဘိုးလင်းပုလင်း” များအား ရွာသူရွာသားများ၏ သီးနှံစိုက်ခင်းအတွင်းမှ စိုက်ပျိုးသော နဂါးပဲမျိုးစေ့ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒိုင်လူကြီးမှ အဆိုပါဘိုးလင်းပုလင်းများအား သဲဖြင့် အတန်းလိုက်စီတန်းထားကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများသည် အလှည့်ကျဖြင့် မိမိလက်အတွင်းရှိ မျိုးစေ့အား ၎င်းဘိုလင်းပုလင်းများအား ထိမှန်အောင်ပစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အများဆုံးထိမှန်အောင်ပစ်နိုင်သူမှာ အနိုင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် – လေးခု ။
အလွန်စည်းကားသော အားကစားပြိုင်ပွဲအား တစ်နေ့တာကျင်းပပြီးနောက် လီအဲ့ကျင်းသည် လက်ဆင့် ကမ်းပြိုင်ပွဲတွင် စိတ်မကောင်းစွာရှုံးနိမ့်ကာ ဆုရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ကျော်ယွိယွဲ့မှာမူ “ဘိုလင်းကစားနည်း” တွင် ပထမဆုရရှိခဲ့သည်။
ချူတုံးကွာကျေးရွာ၏ ပထမအကြိမ် သီးနှံရိတ်သိမ်းပွဲတော်သည် ပျော်ရွှင်ရယ်မောမှုကြားတွင် ပြီးဆုံး ခဲ့သည်။ သို့သော် တအောင်းလူမျိုးများ၏ တံခါးပိတ်ပွဲတော်မှာ မပြီးဆုံးသေးပါ။ ချူတုံးကွာကျေးရွာမှ ရွာသူရွာသားများသည် တောင်ယာစိုက်ခင်းများတွင် လက်ဖက်ခူးခြင်း၊ အခွံမာသီးခူးခြင်း စသည်တို့အား ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အခြားသောပွဲတော်များနှင့်ကွာခြင်းမှုမှာ ချူတုံးကွာကျေးရွာ၏ သီးနှံရိတ်သိမ်းပွဲတော်သည် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် ပျော်ရွှင်ယစ်မူးသည့်ပွဲတော်မဟုတ်ပဲ လုံ့လဝီရိယနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို ဖော်ညွှန်းသောပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တအောင်းလူမျိုး၏ ရိုးရာအစဉ်အလာဖြင့် ချူတုံးကွာကျေးရွာအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော လူမှုဘဝရရှိရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန် စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အပိတ်စားသား – ၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ချူတုံးကွာကျေးရွာတည်ရှိသော တယ်ဟုန်ပြည်နယ်ခွဲ မန်စီခရိုင်သည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်ခရိုင်စာရင်းမှ အောင်မြင်စွာ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ သည်။
နှစ် (၄၀) ခံစားချက် – ကျွန်တော်တို့သည် သီးနှံရိတ်သိမ်းမှုအား ဂုဏ်ပြုသည်။ လုပ်အားအပေါ် ဂုဏ်ပြုခြင်းသည် အမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်သည် ကြိုးစားအားထုတ်သူတို့၏ခေတ် ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်မှုသည် ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ ရလာဒ်ဖြစ်သည်။
သမ္မတရှီကျင့်ဖျင်၏အမှာစကား – ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံကြီးဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး အပေါ် အလေးထားခြင်းသည် ပြည်သူလူထုအား သာယာငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေး၏ အဓိကအခြေခံဖြစ်သည်။
← ယူနန်သွင်းကုန်ဈေးကွက်စစ်တမ်း(၂)၊ ပုံသဏ္ဌာန်ချစ်ဖွယ်ရာကောင်းပြီး ချိုလည်းချိုသော ထိုင်းနိုင်ငံနာနတ်သီးလေး